ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာတရားတွေကို လူများစုကတော့ ပိုမိုသက်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ အခြေမခိုင်မှုတွေနဲ့ မိမိတို့နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာတွေကို အထင်မကြီး မလေးစားမှုတွေလည်း ရင်ထဲမှာ အလိုအလျှောက်မွေးဖွားလာစမြဲပါ။
တကယ်လို့သာ တန်ခိုးရှင်တွေက လူသားတွေကို ဖန်တီးတာလို့ ပြောရင် မေးစရာရှိတယ် ဘာလို့ ဖန်တီးတာလဲလို့ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာကို ဒုက္ခရောက်အောင် တမင်သက်သက်လူဖန်ဆင်းပြီး ဒုက္ခပေးတာလားလို့ပေါ့။ လူဖြစ်တာတောင်မှ ကွဲပြားမှုပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြဘူး။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုသလိုဘဲ ဇာတ်ဆရာအလိုကျ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကို ကြိုးဆွဲကစားနေတာလား? သူများအသက်စတေးမှ ကိုယ်က ကောင်းရာမွန်ရာရောက်မယ်ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာမှာ တိရိစ္ဆာန် တွေကြီးစိုးပြီး လူတွေကို သတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ရေငုံနှုတ်ပိတ် အသေခံကြမလား? ကပ်သီး ကတ်သတ် မေးစရာ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒီလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာကိုလဲ ဘာသာခြားတွေက မေးစရာတွေ အများကြီးရှိမယ်လို့ ထင်တယ်။
Posted by phyosuhan at 7/18/2011 12:35:00 pm